Ifulethi lipholile kwaye lihonjiswe ngobumnandi. Ibekwe kwenye yezona lali zintle e-Itali, ezibekwe phakathi kweendonga zenkulungwane ye-13. Kunokuba isiseko esihle ezityeleleyo izixeko zobugcisa Umbrian ibalulekileyo: Spoleto linokufikeleleka ngemoto malunga nowama-15 imizuzu ... onokulufikelela e ngaphantsi kweyure.
Le ndlu ifanele ukuhlala ngokukhululekileyo abantu ababini, kodwa kukho ibhedi yesofa kabini kwigumbi lokuhlala-ekhitshini. Ixhotyiswe: ukufudumeza, amanzi ashushu, indawo yomlilo, inethi zeengcongconi kuzo zonke iifestile, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iketile yombane.
IVallo di Nera, ukongeza ekubeni yenye yezona lali zintle zamandulo e-Itali, ngenxa yesikhundla sayo sisiseko esihle kakhulu sohambo lwendalo kunye notyelelo kwizixeko ezininzi zomdla wobugcisa nenkolo e-Umbria. Kwakhona kwindawo ekufutshane, kukho amaziko apho unokuziqhelanisa ne-rafting, uhambo olukhokelwayo ngeenyawo okanye ngebhayisikili yeentaba, ukuloba, i-canyoning. Kwaye umntu akanakuhlala engakhathali kwizibonelelo ezinomdla ze-gastronomic zale ndawo ...
Ndizakufikeleleka lula ngomnxeba nasemntwini: Ndihlala kumgama weekhilomitha ezimbalwa.
Inombolo yomthetho: 612